PressReader - Isolezwe: 2017-10-13 - Imibhede engamadabuli ifana nesichitho othandweni
Imibhede engamadabuli ifana nesichitho othandweni
Isolezwe - 2017-10-13 - IMIBONO -
WAKE wasiyala umuntu owaqeda imibhede engamasingili waqeda wasilethela le mibhede engamadabuli esiphenduke abadabuli bothando. Le mibhede engamadabuli ifana nesichitho othandweni ngoba ijike iphoqe ukuthi abantu abathandanayo balale bebambene noma bezizwa ukuthi abathandi ngalelo langa. Umbhede oyidabuli uyinkinga ngoba awukuvumeli ukuthi ukhululeke ulale ngendlela othanda ngayo. Uma abantu ababili belele kulo mbhede bayaphushana, uthole ukuthi omunye uhlaba omunye ngendololwane okanye amgwaze ngedolo esifubeni.
OkaVolos usengasho angesabi ukuthi ukulala embhedeni owodwa zonke izinsuku yikhona okwenza amagazi abantu abathandanayo ajwayelane kakhulu kuze kulothe umlilo wenkonzo yasekamelweni.
Thina sikhule ogogo nomkhulu belala ngokwehlukana, ugogo elala ngesicansi sakhe ngasesandleni sokhohlo nomkhulu elala ngesicansi sakhe ngasesandleni sokudla. Kanjalo nobaba nomama bebelala ngokwehlukana benemibhede engamasingili, uma ungena endlini elala ubaba nomama ububafica belele ngokwehlukana. Abantu abadala babengenzi ubulima uma belala ngokwehlukana, ukulala kwabo ngokuhlukana kwakunomqondo ojulile wokwenza isiqiniseko sokuthi akupheli ukukhumbulana. Imfihlo yokuthi umuntu wesilisa nowesifazane bahlale bahlale befisane icashe ekutheni bavakashelane uma befunana. Kuyinto esobala ukuthi abantu abathandanayo abasoze bakhumbulana uma bevakashelana zonke izinsuku ngoba isidina siyazakhekela.
MaSolezwe, uVolos akasho ukuthi azikho izimfamona ezifaka izichitho uma kunabantu ababili abathandanayo kodwa uthi akuqashelwe lemibhede engamadabuli ngoba yenza abathandanayo bagcine bengasanakani. Umbhede oyidabuli wenza amagazi ezithandani ajwayelane kuze kuphele umazibuthe wokuthi niwubulili obehlukene. Uthole ukuthi ulele nomuntu othandana naye kodwa igazi lakho lishone phansi ongathi uzilalele nobhuti noma usisi wakho. Ukulala ndawonye kwabantu abathandayo kwenza amagazi abo adikibale agcine engasathuki uma besondelene.
Ngokomthetho kufanele ngabe abefundisi abashadisayo bayayikhuluma lendaba yemibhede engamadabuli uma beluleka abantu abashadayo.
Umsuka wamadivosi amaningi asukela entweni engelutho njengombhede, othole ukuthi abantu abashadile abasabhekani ngenxa yokuthi omunye usekhathele ukuhonqelwa omunye. Ukuhonqa ungakuthatha njengento engelutho kodwa kuyawephula umoya womuntu uma kufanele kube yinto yazozonke izinsuku.
Ukuhonqa kwabantu akufani, kukhona labo abahonqa ongathi yimoto encane kube khona nalabo abahonqa ongathi yiloli elilayisha izingodo.
Inkinga yokuhonelwa ngumuntu zonke izinsuku kungaholela ekuchithekeni komuzi ngoba akekho umuntu othanda ukuqedelwa ubuthongo bakhe ngenxa yomuntu ohonisa okwexoxo.
Yebo ngiyavuma ukuthi abantu abashadile basuke sebenyamanye kodwa lokho akusho kufanele bahlezi begomothelene zonke izinsuku. Ukuthi abantu banyamanye akukususi ukuthi bayinyama eyehlukene okufanele kube negebana elibehlukanisayo ukuze kungalahleki inkumbulo. Ukuthi umuntu unyamanye nomunye umuntu akuchazi ukuthi uzombekezelela uma esuza embhedeni. Imibhede engamasingili isiza ekutheni nithi ninyamanye kodwa nehlukane ngokulala ukuze umuntu nomuntu asuzele embhedeni wakhe. Uma ucela ukuvakashela embhedeni kaphathina wakho usuke uqondakahle ukuthi uyoshukuma ngoba akuwona umbhede wakho wokuhonqa nokusuza.
Bakwethu indaba yemibhede engamadabuli kufanele ikhulunywe ngoba izinkinga eziningi ziqala kuyona. Uthole ukuthi abantu sebecikene sebelala emakamelweni ehlukene ngenxa yokuthi abanayo imibhede engamasingili ebenza balale ekamelweni elilodwa behlukene.